जनप्रिय सिडिओ दुर्गा बञ्जाडे – KarnaliPost Daily
जनप्रिय सिडिओ दुर्गा बञ्जाडे
१५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १२:५५ June 1, 2020 by Karnali Post Daily
प्रजिअ दुर्गा बञ्जाडे
दिलमाया शाही : जुम्लाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलको सरुवा भइसकेपछि जुम्लामा अर्को सिडिओ को आउने भन्ने उत्सुकता जुम्लाबासीमा थियो । २०७५ फागुन महिनामा सिडिओ फेरबदल भयो । जुम्ला सरुवा भएर आउने सिडिओको सुचिमा दुर्गा बञ्जाडेको नाम थियो । उनी यहाँ पहिलो पटक महिला सिडिओ भएर आउदैथिइन् । अहिले सम्म प्रशासक महिला भएको नसुनेका र नदेखेका जुम्लीका बीच निकै चर्चा हुन्थ्यो । हुन त बञ्जाडे सिडिओ नै हुन् । तर महिला सिडिओ भएकोले सबैले चर्चाको बिषय बनाउँथे । अब जुम्लाको शान्ति सुरक्षा कस्तो हुने,समन्वय सहकार्यको पक्ष के हुने भन्ने बिषयमा सबैको मनमा कौतुहलता हुन्थ्यो ।
चियाचौतारी,सार्बजनिक स्थानमा महिला सिडिओ आउदै छन भन्ने चर्चा निकै चुलिएको हुन्थ्यो । हुनत जिल्लामा सिडिओ फेरबदल भइरहने नियमित प्रक्रिया हो । तर त्यो भन्दा महत्वपुर्ण पक्ष भनेको कुन सिडिओले कस्तो काम गर्यो भन्ने नै हुन्छ । जुम्ला पहिलो पटक महिला प्रशासक पाएकोमा खुसि पनि थियो । तर उनले गर्ने कार्य जिम्मेवारी बारे पनि अनेकन प्रश्न उठिरहेका थिए । लाग्थ्यो अब जुम्ला उदाहरणीय बन्छ ।
जुम्ला आइपुग्नु अघि सामाजिक सञ्जालमा प्रोफाइल पल्टाएँ । उनी त एक प्रशासक मात्र होइन् । साहित्यकार पनि जस्तो लाग्यो । त्यो भन्दा बढ्दा लेखिका जस्तो । त्यो प्रोफाइलबाटै मैले मुल्यांकन गरिसकेकी थिए । जुम्लाबासीले अहिले सम्मकै राम्रो सिडिओ पाउँदैछन् । महिला सिडिओको यो कार्यकाल निकै प्रभावकारी बन्छ । समग्र महिलाको लागि गर्व गर्न लायक बन्छ ।
म त ढुक्क थिए । तर महिला प्रशासक भएर आउँदा चल्ने चिया चौतारीको बहसले निकै मन पिरल्थ्यो । के महिला प्रशासक बन्न मिल्दैन् ? शान्ति सुरक्षा, अमनचयन प्रभावकारी बनाउन सक्दैनन् ? जस्ता प्रश्नले मनभित्र घर बनाइरह्यो । सिडिओ बञ्जाडे जुम्ला आउने ४७ औ सिडिओ हो । जब २०७५ फागुन १७ गते जुम्ला पुगेर प्रशासकको कार्यभार समालिन तब जुम्ला साच्चिकै गौरवान्वित थियो । उनको आगमनलाई जुम्लाबासीले फरक तरिकाले हेरेका थिए । हाम्रो समाज ‘महिला मुखेनी बाख्रो बटालो’ भन्ने उखानले भ्रमित थियो । पुरुष सिडिओको काम हेरिसकेका जुम्लीले महिला सिडिओको काम हेर्ने ठुलो अवसर पाएको अनुभुति गरिरहेका थिए ।
देखावटी रुपमा महिला अधिकारका सवाल उठाउने तर भित्रभित्रै महिला हिंसाका क्रियाकलापमा संलग्न हुने अधिकांसलाई १ सय ४ डिग्रीको ज्वरो आइसकेको थियो । सिडिओ सिंगो जिल्लाको अभिभावक भएकोले पुरुष सिडिओलाई बा र महिला सिडिओलाई आमा भन्थे । एक दिन बाबा गए , आमा सिडिओे आइन रे भन्दै कुरा काटेको सुने । मन कटक्क भयो । मनमनै सोचे महिलाले जन्माएको समाजले महिलाको काम लाई किन पत्याउँदैन् ? उनीहरुको घृणित सोचबाट महिलाले कहिले मुक्ती पाउने ?
महिलाको रुपमा गणना भएकी सिडिओ दुर्गा बञ्जाडेले ४६ औँ सिडिओ भन्दा अब्बल काम देखाएर छाडिन् । जुम्लामा आएपछि उनले प्रशासनिक रुपमा कैयन सुधार गरिन् । त्यो भन्दा बढि सामाजिक रुपान्तरणमा जोड दिइन् । सायद यो मामलामा अहिले सम्मको सिडिओेले जुम्लाको सामाजिक हितमा काम गरेनन् । गरे त आफ्नो जिम्मेवारी मात्र पुरा गरे । सरकारले तोकेको काम बाहेकको काम गर्न सकेनन् ।
पहिलो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउनेलाई मुस्कान सहितको सेवा प्रवाहमा जोड दिइन् । महिलामैत्री शौचालय बनाइन् । अपांगमैत्री सेवा सञ्चालन गरिन् । लागुऔषध ओसारप्रसार तथा सेवनका २३ वटा मुर्दा दर्ता गरी कानुनको दायरामा ल्याउन सफल भइन् । बैंकिङ कसुरको अपराधि प्रकाउ गरी ४६ लाख रुपैयाँ असुल उपर गर्न सक्षम भइन् ।
बालबिवाह बिरुद्धका २ वटा मुर्दा जुम्लामा पहिलो पटक दर्ता भए ।,जुम्लाका ४६ सरकारी कार्यालयबाट एकै पटक नागरिक सुनुवाई कार्यक्रम भयो । समाजमा जरागाडेर बसेको छाउपडि बिरुदको महायज्ञ भयो । प्रत्येक स्थानीय तहमा छाउपडी दुत तोकिए । पालिका स्तरमा हेलिप्याड निमार्ण ,गाउबस्तीमा पुगेर एकिकृत घुम्ती शिविरमा सिमकार्ड वितरण देखी नागरिकता दिने सम्मको काम बञ्जाडेको कार्यकालमा भयो । यसले साच्चिकै लोकतन्त्रको अनुभुति गराइरहेको थियो ।
प्रहरी साँझेदारी कार्यक्रम मार्फत १ सय ६५ वटा बिद्यालयमा विभिन्न सचेतनाका क्रियाकलाप भए । नागरिक सहायता कक्षा स्थापना, प्रशासनमा सेवा लिन आउने गर्भवती र नवजात शिशुभएको आमाका लागी आरामदायिक स्तनपान कक्षको ब्यवस्था पनि भयो । पहिलो पटक खसभाषामा अडियो नागरिक बडापत्र बन्यो । प्रत्येक कार्यालयमा सुचना अधिकारी तोकिए । जेष्ठनागरिक र अपांगता भएका ब्यक्तिहरुका लागी भेटघाट कक्षको ब्यवस्था भयो । उजुरी पेटिका राखी गुनासो सम्बोधन गर्ने परिपार्टीको विकास सिडिओ बञ्जाडेको पालामा भयो । यो कार्य जुम्लाबासीले कहिल्यै बिर्षने छैनन् ।
नेपालकै प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिरबाट हराएको मुख्य मूर्ति पनि सिडिओ बञ्जाडेको कार्यकालमा भेटियो । लागुऔषध ओसारपसारका लागि घरघरमा छापा मार्न थालेपछि बारीमा मुर्ति भेटिएको थियो । सिडिओ बञ्जाडे सामाजिक कुरीतिको अन्त्य आफैबाट शुरु गर्नु पर्ने बताउँछिन् । प्राय जुम्लामा आउने सिडिओ हिउँदको महिना जुम्ला बस्दैनथ्ये । उनी माइनस ८ डिग्री चिसोमा बसिन । जनताको सेवालाई सर्वोपरि ठानिन । यो उनीबाट सिक्नु पर्ने पाठ हो ।
उनी काम गर्न बजेट मात्र भएर हुदैन । इच्छाशक्ति भएको खण्डमा जस्तो सुकै कठिन काम पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न चाहन्थिन् । अहिले छाउ भएको खण्डमा देविदेवताको मन्दिर छुन हुदैन् । देवता रिसाउछन भन्ने मान्यताले घर बनाइरहेको अवस्थामा उनले महायज्ञ गरेर धामीझाक्रीको भेला गर्दा सबै जिल्ल परे ।
सिडिओ बञ्जाडेलाई सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी,सामाजिक अगुवा (धामी, झाँक्री र पुरोहित), शिक्षक, विद्यार्थी लगायत सर्वसाधारण सबैले साथ दिए ।
महिनाबारी बार्दा हुने विभिन्न स्वास्थ्य समस्या मध्ये पाठेघरको समस्या जुम्ली महिलामा छ । महिनावारी हुँँदा पोषिला खानेकुरा खाना नदिनु, धेरै भारी बोक्नु, लगायतले महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या बढेको बढयै छ । प्रतिष्ठानका मेडिकल रेकर्डर मेगराज बुढा गरिबी तथा जनचेतनाको अभावले धेरै महिलाहरूमा पाठेघर खस्ने समस्या हुने गरेको बताउँछन् । विशेषगरी पिछडिएका समुदाय, दलित, अशिक्षित र गरिबीको चपेटामा परेका महिलाहरूमा पाठेघर खस्ने समस्या अझै विकराल देखिन्छ । सामाजिक अपहेलनाको त्रासले तथा लाज मानेका कारण रोग लुकाएर बस्ने महिलाको संख्या झन विकराल छ । लाजका कारण सुविधासम्पन्न स्थानमा बस्ने महिलासमेत पाठेघरको समस्या लुकाउने गर्छन् । त्यस्तै छुई भएको समयमा गोठमा बस्नु, उमेर नपुग्दै बिहे गर्ने, गर्भवती तथा सुत्केरी भएको बेला गह्रौ भारी बोक्ने सरसफाइमा ध्यान नदिने, कुपोषण लगायतका कारणले पाठेघर खस्ने समस्या हुने गरेको भन्दै सिडिओ बञ्जाडे गाउँबस्तीमा स्वास्थ्यकर्मी टोली लिएर आफै पुगिन् ।
भारी बोक्दा उकालो ओरालो गर्दा फोहोरको कारणले पाठेघरमा रोग लाग्छ भन्ने थाहा नभएका महिलालाई महिनाबारी भएको समयमा अपनाउनु पर्ने साबधानीको बिषयमा सचेत गराइन् ।
कैयनले छाउपडी सिडिओ पनि भने । तर छाउपडि बिरुद्धको महाअभियानमा उनी कठोर बनिन् । यहाँको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक पाटा पक्षका बारेमा जानकारी हासिल गरेर त्यही अनुकुलको योजना बनाएर कार्यन्वयन गर्न थालिन । अहिले उनी जुम्लाबासीको जनप्रिय सिडिओ हुन् । अहिले सम्मकै अब्बल र सफल सिडिओ पनि ।
पन्ध्र महिनाको कार्यकालमा उनले कुनै नेताको दबाव मानिन् । सुनेको भरमा निर्णय गरिनन् ।बास्तविक सुझबुझका साथ अघि बढिन् । साच्चिकै दुर्गा बञ्जाडे जुम्लाबासीको एक कुशल अभिभावक हुन् । उनी सिडिओको भुमिका भन्दा पनि यहाँको नागरिकको भुमिकामा रहिन । सामाजिक सेवा नै धर्म हो भन्ने ठानिन् । महिलाको काम नपत्याउने हाम्रो समाजको लागि उनी एक उदाहरण बनिन् । अन्तिम सम्म निमुखा र गरिब जनताको भरोसा बनिन् । जनताको आँखाको नानी बनिन् ।
हाम्रो पुरुषप्रधान समाजमा जब नेतृत्वको कुरा आउँछ,तब पुरुष नै अघि सछर्, कारण वर्षाैंदेखि थिचोमिचोमा राख्ने बानीपरिसकेको यो समाजले महिला नेतृत्व पचाउँदैन् । पुरुषले आफ्नो उत्तराधिकारी पुरुषै देख्न चाहँदो रैछ । दुर्गा बञ्जाडे शान्ति सुरक्षाको पाटोपक्षको मात्र नेतृत्वकर्ता भइनन् । जुम्ली महिलाका लागि एक प्रेरणाको पात्र बनिन् । उनीबाट जुम्ली महिलाले धेरै कुरा सिकेका छन् । अहिले उनी पाल्पामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर गएकी छिन् । उनको यो कार्यकाल पनि सफल होस । आगामी दिन अझै प्रभावकारी र जनमैत्री हुदै जाउन सिडिओ बञ्जाडेको कार्यकाल सफलताको शुभकामना ।